Usesho lwe-Amazon lusebenza kanjani?
Wake wazibuza ukuthi i-Amazon inquma kanjani izinga lomkhiqizo ngamunye? I-Amazon isebenzisa i-algorithm yayo ekhethekile ebizwa ngokuthi i-A9. Njenge-Google, i-Amazon igcina ngasese ukuthi i-algorithm yabo eyinhloko isebenza kanjani futhi i-Amazon kuphela iyazi ngokuqinisekile ukuthi ihlanganiswe yini ohlelweni lwabo lwesimo.
Ngokusho kophenyo lwamuva, i-Amazon iye yafinyelela ngisho ne-Google ngenani labasebenzisi abafuna imikhiqizo - restaurant table manufacturers. Ngokuqondene nami, kuyisizathu esiyinhloko sokugcina i-algorithm yesimo ngasese. Kungenzeka ukuthi yingxenye yesizathu sokuthi i-algorithm iqhubeka kanjani ngcono futhi ibuyekezwa yi-Amazon.
Njengoba ama-Amazon abamele, enye yezinhloso eziyinhloko ze-Amazon A9 algorithm ukuhlinzeka abasebenzisi ngemiphumela yosesho efanele kakhulu. Yingakho bazama njalo ukuthola imiphumela engcono futhi bathuthukise isipiliyoni sokusesha komsebenzisi. I-A9 yesimo se-algorithm ifunda ngokuzenzakalelayo ukuhlanganisa izici eziningi zokubaluleka. Idatha yezincwadi ze-Amazon ikhiqize inikeza izici eziningi zokubaluleka. Ngakho-ke, ama-Amazon angafunda emaphethini okucinga okudlule futhi alungise le datha kulokho okuphawulekayo kumakhasimende. Ngale ndlela, ikhasimende ngalinye ku-Amazon lithola ikhasi lekhasi lokusesha elihlukile ngokusekelwe kubacwaningi bakhe basendulo, ukuthenga, nokuthandayo. Yonke imiphumela yosesho ilandelwe futhi ifakwe ku-oda yalokho okubaluleke kakhulu kumsebenzisi.
Kule posi emfushane, sizoxoxa ngezinto eziyinhloko zangaphakathi nezangaphandle ezithinta isikhundla se-Amazon nezinye izinto ama-Amazon azibheka ngokunikeza isikhundla esithile sekhasi ngomkhiqizo ngamunye.
Izici zangaphakathi zase-Amazon
Izinto ezibalulekile zangaphakathi i-Amazon ezibhekisele imikhiqizo yezinhlobo zifaka:
Azikho iziqondiso eziqondile ezinikezwa ukuthi izahlulelo ze-Amazon zizimisele kanjani. Nokho, singasho ukuthi ama-Amazon acabangela izinto ezifana nenombolo nekhwalithi yokubuyekezwa komsebenzisi kanye nesimo sezinkanyezi zomkhiqizo ngamunye..Ngaphezu kwalokho, i-Amazon ibala inani lokuchofoza kusuka kusesho nezinye izici zokuziphatha ezichaza isipiliyoni sokusesha komsebenzisi.
Lesi simo esingaphakathi simo kubalulekile, kodwa ngaphandle kwemingcele nemininingwane yokuhlaziywa, sishiywa ebumnyameni .
Amamethrikhi ebhizinisi abalulekile
Okushoyo konke i-Amazon inomgomo owodwa engqondweni. Lokhu kukhulisa inzuzo kanye nenzuzo yebhizinisi jikelele. Kodwa akucaci ukuthi i-Amazon isebenzisa kanjani ukulandelela nokukala amamethrikhi ebhizinisi elibucayi.
Ama-metric angu-Amazon ukusebenza
Ukwaneliseka kwamakhasimende kungenye yezinyathelo eziphawulekayo zokusebenza ama-Amazon acabangela ukuthi wenza kahle kangakanani umdayisi ku-Amazon. Abathengisi be-intanethi bangahlola ukuthi benzani ngokuphathelene nokwaneliseka kwamakhasimende, kubhekisela kudeshibhodi yezempilo ye-Akhawunti.
Iziphi izinto ezingathinta isikhundla sakho se-Amazon? Isigaba sokuthengisa
Isikhundla sokuthengisa siyisici esibonakalayo se-Amazon esilinganisweni esingathinta ngqo umkhiqizo wakho emkhakheni wemiphumela yokusesha. Iphakethe izinga lakho lokuthengisa, ngcono amaphuzu wakho wokubaluleka uma amakhasimende afuna umkhiqizo azoyithenga. Ukuze uthuthukise izinga lakho lokuthengisa e-Amazon udinga ukwenza amadili angcono kakhulu.
Uma umsebenzisi efaka umbuzo wakhe ebhokisini lokucinga le-Amazon, kungenzeka ukuthi ucabanga ngokuthenga okuthile. Ukukhuthaza ikhasimende ukuthi lenze i-oda, i-Amazon inikeza uhlu lwemikhiqizo elandelwe yi-algorithm futhi ibhalwe ohlwini lokuhlelwa kwezinto ezihambisanayo. Uma umsebenzisi ethola uhlu oluhambisana nemikhiqizo yombuzo, i-Amazon iqala ukulandela lokho okuchofoza kukho okulandelayo. Ngakho-ke, i-Amazon ibalwa ngamazinga okuchofoza futhi ihlanganisa lezi zibalo ku-algorithm.